तपाई लकडाउनको सदुपयोग कसरी गरिरहनुभएको छ ? -
ON AIRकार्यक्रम "चौतारी"
तपाई लकडाउनको सदुपयोग कसरी गरिरहनुभएको छ ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १५, २०७७ समय: ९:५९:४०
डुम्राहा,विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको त्रास पूर्ण वातावरणमा केही काम गर्न पाइएको छैन भन्नु अब गलत हुन सक्छ । किनकी लकडाउनको समयमा केही मानिसले आफुभित्र रहेको प्रतिभालाई कामको व्यस्तताका कारण प्रस्तुत गर्न नपाएकोमा लकडाउनको बेला कामबाट फुर्सद भएकोले आफ्नो कला र कलाकारिता देखाउन पाएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि चैत्र ११ गते देखी नै लकडाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउनको समयावधि लम्बिदै जानाले मानिसहरुको जनजिवन भने प्रभावित भइरहेको नै छ । तर यही अवसरमा लकडाउनको फाइदा लिएर परिवार सँग सुखः दुःख साँटासाँट गरेर हस्त शिपको प्रयोग गर्ने, थोरै ठाउँ भएका करेशाबारीमा साग तरकारी लगाउने, छुटेका घर आँगन भित्रका कामहरुपनि गरेर समय विताइरहेका छन् ।
ज्यान रहे जहान रहन्छ भन्ने कुरा सत्य हो, यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले पनि लामो समयदेखी लकडाउन घोषणा गरेको अवस्था छ । तर कोरोना भाइरसबाट ज्यान जोगाउन लाग्दा लकडाउनले नै ज्यान लेला जस्तो भइसकेको छ । अब ज्यान रहे जहान रहन्छ भन्ने हैन ज्यान पनि जहान पनि भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । ज्यान र जहान जोगाउने एउटै उपाय रहेको छ जनताको भोक मेटाउनु । अर्थात रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु । तर सरकारको मुख ताकेर मात्र पनि हुँदैन, आफैपनि रोजगारीको सृजना गर्नु यतिखेरको आवश्यकता देखिन्छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै एकजना शिपालुले आफ्नो हस्तकलालाई प्रस्फोटनमा मन, बचन र कर्मले लागेको छ ।
उनले बनाएका केही बस्तुहरुको तस्वीरहरु
सुनसरीको रामधुनी नपा वडा नं. ८, डुम्राहा, हटिया चौक निबासी ४० वर्षिया रामकुमार चौधरीले आफ्नो शिप र कलालाई लकडाउनको अवसरमा प्रस्तुत गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । काठको फर्निचर सम्बन्धि शिप भएको भएपनि उनले काठबाट बन्ने कलात्मक हस्तकलाबाट निर्मित बस्तुहरु पहिले कहिले बनाएको थिएन् । लकडाउनको बेला कामबाट फुर्सद भएको मौका पारेर उनले विभिन्न आकर्षक सामानहरु बनाएका छन् । उनले बनाएका बस्तुहरु काठबाट निर्मित गमला, पूmल, टेवल सजाउने बस्तुहरु, चुरा राख्ने बस्तु, सर्प तथा चरा, पौराणिक परम्परागत दैनिक प्रयोगहुने बस्तुहरु रहेका छन् । लकडाउन खुले पछि हस्तकलाबाट बनेका यी बस्तुहरुलाई उचित मुल्यमा बेचेर आय आर्जन गर्न सकिने उनले बताए । डुम्राहा निवासी चौधरीले खाने मुखलाई जुगाँले छेक्दैन भन्ने कुरालाई सावित गरेको छ ।
घरमा अन्न हुनेले हस्तकला देखाउने, खेतबारी खन्ने लगाएतको काम गर्न सकिन्छ तर घरमा अन्न र भूमी पनि नभएका दैनिक ज्याला मज्दुरी गर्ने श्रमिकहरु, रिक्सा चालकहरु अनी विभिन्न ठाउँबाट रोजगारीका लागि बहालमा बसेका मानिसहरुको जनजिवन कत्तिको दुःखद भइरहेको होलान् , यस तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहन जान्छ ।